Mey 8, 2018 Admin
New York Stock Exchange dia mety hanomboka Bitcoin sehatra varotra
Ny ray aman-dreny fiangonana, dia ny New York Stock Exchange dia miasa amin'ny sehatra ara-barotra an-tserasera izay mety hamela ny mpampiasa vola lehibe mba hividy sy mihazona Bitcoin, araka ny mailaka sy ny antontan-taratasy raisin 'ny The New York Times sy olona efatra briefed ny ezaka izay nangataka ny tsy mitonona anarana, satria ny drafitra mbola tsiambaratelo.
Oracle ny hanomboka blockchain-as-a-fanompoana sehatra tamin'ity volana ity
Software goavana Oracle dia rehetra napetraka mba ampahibemaso hanomboka ny blockchain-as-a-fanompoana sehatra tamin'ity volana ity. Frank Xiong, Oracle ny filoha lefitry ny vondrona Blockchain Cloud Service, hoy amin'ny fampisehoana fa ny mafy na mikendry ny hisarihana ny lehibe sy ny orinasa madinika, amin'ny Pricing mifototra amin'ny raharaham-barotra boky.
Moscow fitsarana fitsipika cryptocurrency no anisan'ny toetra Tsy niraharaha
A Moscow fitsarana no nitondra ny ahitana cryptocurrency mpanjifany izay tafiditra ao ny trosa Tsy niraharaha ny toetrany, ny kitapom-batsy manaiky ny fanalahidy sy ny vola toy ny fananany. Ny olana dia raha famantarana ny tompon-crypto kitapom-batsy sy ny fanalahidy dia azo atao na tsia. Ny fitsarana nanjaka famantarana dia azo atao ary ny fanalahidy tsy maintsy niala tsy ho anisan'ny ny toetry ny mpitrosa.
Noho ny launc ...
Belarosia fomba ofisialy legalizes crypto rehetra mifandraika raharaha sy ny varotra
Ankehitriny Belarosia offici ...
Previous Post:12 Shinoa ampiasaina blockchain amin'ny banky 2017
Mey 21, 2018 amin'ny 2:15 AM
Mey 26, 2018 amin'ny 5:30 PM
Mey 28, 2018 amin'ny 1:39 AM
Jona 10, 2018 amin'ny 11:49 PM
Jona 12, 2018 amin'ny 7:32 AM